तपाइको खानेकुरा पकाउने शैलीले पनि निम्त्याउन सक्छ क्यान्सर, यी कुरामा ध्यान दिनुस – Halkhabar kura
६ फाल्गुन २०७६, मंगलवार १०:०८
तपाइको खानेकुरा पकाउने शैलीले पनि निम्त्याउन सक्छ क्यान्सर, यी कुरामा ध्यान दिनुस
काठमाडौं । हामीले खाने खानाबाट मात्रै हैन ,खाना बनाउने तरिका नमिल्दापनि धेरै रोगहरुको सिकार बनिरहेका हुन्छौ । खाना किन खाइन्छ रु अघाउनका लागि रु पेट भर्नका लागि बाँच्नका लागि रु स्वस्थ्य र तन्दुरुस्त हुनका लागि ?
हाम्रो प्रवृत्ति हेर्दा यसको जवाफ हुनसक्छ, जिब्रोको तलतल मेट्नका लागि । अर्थात स्वाद फेर्नका लागि । अक्सर खानेकुरा तयार गर्दा, खाँदा हामी स्वादलाई प्राथमिकता दिन्छौं । कुन खानेकुरा कति स्वस्थ्यवर्द्धक भन्ने कुरामा ध्यान दिदैनौं । कुन खानामा कति पोषक तत्व छ ?
त्यस्ता पोषक तत्व कसरी ग्रहण गर्ने रु यसमा हामी बेखबर छौं । बस् हामीलाई त जिब्रोको स्वाद मेट्न पाए पुग्छ । त्यही कारण खानेकुरा पकाइरहँदा हामी हेक्का राख्दैनौ कि उक्त खानेकुराको पोषकतत्व कसरी सुरक्षित रहन्छ ? यो प्रश्न किनपनि उठ्छ भने खानेकुरा पकाउने क्रममा त्यसको पोषक तत्व नष्ट हुन सक्छ । यदि मिठो बनाउने चक्करमा लागियो भने । त्यती मात्र कहाँ हो र रु खानेकुरा पकाउने क्रममा गरिने कतिपय गल्तीले क्यान्सर जस्ता घातक रोग लाग्न सक्छ ।
अर्थात खानेकुराको नाममा हामी बिष सेवन गर्न पुग्छौं ।
हामीकहाँ के चलन छ भने, धेरै तेल हालेर खानेकुरा पकाउदा चै मिठो हुन्छ । एकपटक प्रयोग गरेर तरकारी पकाउदा तेल बाँकी रह्यो भने, त्यसलाई पुन प्रयोग गर्ने गर्छौ । बजारको खानेकुरामा त यस्तो अधिक हुनेगर्छ । यद्यपी घरमा पनि हामी त्यही गल्ती गरिरहेका हुन्छौं । किनभने एक पटक प्रयोग गरिएको बाँकी तेल फ्याक्न हामीलाई लोभ लाग्छ । त्यसलाई पुन प्रयोग गर्छौ, तर त्यसले स्वास्थ्यलाई भने गंभिर असर गरिरहेको हुनछ ।
चाडपर्व, बिहे भोजमा तेलको अत्याधिक प्रयोग गर्छौ । मिठाई वा अन्य खानेकुरा पकाएर बाँकी रहेको तेल राख्छौं । त्यसलाई पुन प्रयोग गर्छौं । एक पटक प्रयोग गरिसकेको तेल दोस्रो वा तेस्रो वा चौथो पटकसम्म पुन प्रयोग गर्छौं । एक पटक कुनै खानेकुरा पकाएर बाँकी रहेको तेललाई पुन तताउँदा त्यो विषाक्त बन्छ । आहार विशेषज्ञका अनुसार ‘त्यसरी तताउँदा मुक्त कण बन्छ ।
यो मुक्त कण स्वस्थ्य कोशिकासँग जोडिन्छ र त्यसले केहि रोग पैदा गर्छ ।’विज्ञका अनुसार त्यस्ता कारणले क्यान्सर समेत पैदा गर्न सक्छ । रक्त धमनीमा खराब कोलेस्ट्रोरको स्टर बढाउँछ । धमनीमा अवरोध आउँछ । तेल तताउँदा कराहीमा कालो बोसो तत्व जम्मा हुन्छ । यो बोसो जब शरीरभित्र प्रवेश गर्छ, त्यसले कोलेस्ट्रोल बढाइदिन्छ । यसले मोटोपन पनि बढाइदिनसक्छ । एसिडिटी र मुटुको समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
डिप फ्राइ खानेकुरा बनाउदा पनि हामीलाई धेरै असर गरिरहेको हुन्छ । हामी स्वादको लागि डिप फ्राइ गरेर खानेकुरा सेवन गर्छौ । तर, यो एकदमै हानिकारक हुन्छ । डिप फ्राइ गर्दा त्यसको भाँडामा रहेको केमिकल खानेकुरामा मिसिन्छ ।
खानेकुरामा रहेको पोषक तत्व नष्ट हुन्छ । अत्याधिक तताइएको तेल पनि विषाक्त बन्छ । त्यसैले संभव भएसम्म डिप फ्राइ खानेकुरा सेवन गर्नु हुँदैन । यसकारण पनि हामिले खाना खादा देखि पकाउदा सबै कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्छ ।
Previous पूर्वसांसद तथा नेपाली कांग्रेस गुल्मी संस्थापक सभापति भागवत ज्ञवालीको निधन
Next थाहा पाईराख्नुस, दिनको एउटा स्याउ खानुका फाईदा यस्ता छन्